A Rohingya ferry boat sank in Pauktaw Myanmar, ​ပေါက်​​တော ဆင်​တက်​​မော်​၌ သေ​င်္ဘာေ​ရမြှုပ်​မှု သတင်း | Danya Wadi
»သတင်းများ»A Rohingya ferry boat sank in Pauktaw Myanmar, ​ပေါက်​​တော ဆင်​တက်​​မော်​၌ သေ​င်္ဘာေ​ရမြှုပ်​မှု သတင်း
A Rohingya ferry boat sank in Pauktaw Myanmar, ​ပေါက်​​တော ဆင်​တက်​​မော်​၌ သေ​င်္ဘာေ​ရမြှုပ်​မှု သတင်း
Posted by danyawadi on April 20, 2016 in သတင်းများ, Breaking News
19.4.2016 at about 9:00 am,aferry boat with 65 Rohingya passangers including man,women and children sank at the entrace of Thay Choung river hitting by big wave while they were coming from Sin Tat Maw ( Sandama) village,Pauktaw township to Sittwe township,Arkan to buy some goods. According to latest news, 15 Rohingya passengers died, about 20 are missing and 20 are alive and 10 are unconcious.
1.Daw Nosima,54 yrs (f)
2.Ma Ro Ma,d/o Noor Alom,16yrs(f)
3.Ma Nilar,d/o U Maung Phyu,21 yrs(f)
4.Daw Nyi Ma Phyu,(f)
5.Maung Gyi,s/o Kurban Ali,42yrs(m)
6.Hason Shorif,s/o Peran Mya2yrs(m)
7.Sajida,d/o U Nura6yrs(f)
8.Muhamad Shorif,s/o Peran Mya,4yrs(m)
9.Hussain Shorif,Hussain Ahmad,3 yrs(m)
10.Daw Mennisa,d/o No Bi,20 yrs(f)
11.Surat Zamal,d/o Bodu,18 yrs(f)
12.Ajida Khatoon,d/o Rohimuddin,6 yrs(f)
13.Solema Khatoon,65 yrs,(f)
14.Ferani,U Kholil Ahmad,60 yrs(f)
15. an unknown name baby.
Sin Tat Maw(Sandama) village is located in estern part of Sittwe and9miles far away from Sittwe.Rohingyas from Sin Tat Maw,Mye Ngy Island and Anok Ywe village and the whole Pauktaw township used to come to Sittwe before violence 2012 landing the boat at Sittwe Municipal Market that is an easy sea way to come to Sittwe.But after violence govt already blocked that way and the Rohingys from Pauktaw areas have to come to Sittwe through Thay Choung the big waves and land Thay Choung beach and Ohn Taw Gyi beach that is very risky. This is systematically making genocide by stopping all human rights.
ပေါက်တောမြို့နယ် ဆင်တက်မော် ရိုညင်ဂျာရွာမှ ရိုဟင်ဂျာ ခရီးသည် ၆၅ ဦး ( အမျိုးသား/အမျိုးသမီး။ ငယ် အပါအဝင်) ဖြင့် စစ်တွေမြို့သို့ဈေးဝယ်ရန် ပင်လယ်ဖြတ် ကျော်ပြီး လာနေသော စက်လှေ တစ်စီး သည် ယနေ့ ၁၉.၄.၂၀၁၄ နံနက် ၉း၃၀ အချိန်တွင် စစ်တွေမြို့ သဲချောင်း ကမ်းခြေ အဝင်ဝ တွင် လှိုင်းလုံး ကြီးများဖြင့် တိုက်မိ၍ ပင်လယ်ထဲ မြုပ်သွား ပါကြောင်း သတင်းရ ရှိပါတယ်။ မြန်မာ စံတော်ရှိန် နေ့လည် ၂း၀၀ နာရီထိ နောက်ဆုံးရ သတင်းအရ အဆိုပါစက်လှေ နှစ်မြုပ်လို့ ခရီးသည် ၁၅ ဦးသေးဆုံးပြီး ၂၀ ဦး ခန့် အသက်ရှင် လျက်ရှပြီး ၁၀ ဦး ခန့် သတိလစ်နေပါတယ်။နောက်ထပ် ၂၀ ဦးခန့် ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။
၁.ဒေါ်နော်ဆီမာ (၅၄) နှစ်
၂.မ ရိုမေနာ (ဘ) ဦး နုရ်အာလောမ် (၁၆)နှစ်
၃.မ နီလာ(ဘ) ဦးမောင်ဖြူ (၂၁) နှစ်
၆. ဟဆောန်ရှောရိဖ်( ဘ) ဦး ပေရာန်မျာ (၂) နှစ်
၇.မူဟမတ်ရှော်ရီဖ်(ဘ) ဦး ပေရာန်မျာ (၄) နှစ်
၈.မ ဆဂျီဒါ(ဘ) ဦးနူရာ(၆)နှစ်
၉.ဟုဆောင်ရှောရီဖ်(ဘ) ဦ ဟုဆောင်အာမတ်(၃) နှစ်
၁၀.မ မေန္နီဆား (ဘ) ဦး နော်ဘီ (၂၀) နှစ်
၁၁.ဆုရောတ်ဇာမာလ်(ဘ) ဦးဘော်ဒူ (၁၈)နှစ်
၁၂.အာဂျီဒါ ခါတူ(ဘ) ဦးရော်ဟီးမုဒ္ဒိန် (၆) နှစ်
၁၃.ဆောလေမာခါတူ (၆၅) နှစ်
၁၄. ဖေရာနီ(ဘ)ခေါလိလ်အဟ်မဒ် (၆၀) နှစ်
ဆင်တက်မော်ရွာသည် စစ်တွေမြိ်ု့ အရှေ့ပိုင်း စစ်တွေမြို့ နှင့် ၉ မိုင်အကွာအဝေး၌ တည်ရှပြီး ၄င်း ဆင်တက်မော် ရွာမှ ရိုဟင်ဂျာ များနှင့် ပေါက်တောမြို့နယ် တစ်ခုလုံးရှိ ရိုဟင်ဂျာ များ သည် ၂၀၁၂ အရေးအခင်းမတိုင်ခင် စစ်တွေမြို့မဈေး ဆိပ်ကမ်း၌ စက်လှေများဖြင့်လာလေ့ ရှိပြီး ဈေးဝယ်ကြပါတယ်။ ၄င်းလမ်းကြောင်းသည် ပင်လယ်လမ်းကြောင်းအားဖြင့် ပေါက်တောမြို့နယ်မှ လူများအတွက် အသွား အလာ လွယ်ကူသော လမ်း ကြောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ အရေးခင်း နောက်ပိုင်း အစိုရသည် ၄င်း လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာ မူစလင်များ အား သွားလာရေး စားဝတ်နေရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး စသည့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို ပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ မူစလင်များသည် မသက်ရှင်ရန်အတွက်ကြီးမားသော အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်ပြီး လှိုင်းထသော ပင်လယ် ကို ဖြတ်သန်း၍ စစ်တွေ သဲချောင်း နှင့် အုန်းတော ဆိပ်ကမ်းများမှ တဆင့် စစ်တွေသိုလာရပါတယ်။ ဒါဟာ စနစ်ကျကျ လူမျိူးတုန်း သတ်ဖြတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
@Peace Muhammad Arkani
← ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချပေးမည့် အစားအစာ ၉ မျိုး
နယူးယောက် ပြည်နယ်၏ သမ္မတလောင်း ရွေးချယ်ပွဲတွင် ဒေါ်နယ်ထရန့် နှင့် ဟီလာရီ ကလင်တန်တို့ အနိုင်ရ →